Home News Dowladda Australia oo qaadatay Go’aan saameeyn doono Soomaali badan!!
Dowladda Australia oo qaadatay Go’aan saameeyn doono Soomaali badan!!
Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday in ay Al-baabada ay u laabi doonto xurumaha lagu haayo dadka Muhaajiriinta ah ee doonaya in ay soo galaan dalka si loo adkeeyo Ammaanka xuduudaha.
Labo ka mid ah sagaalka xarumood ee lagu xiro dadka muhaajiriinta ah ee dalka Australia ayaa albaabada loo laabayaa, tallaabadaasi oo ay dowladdu ku sheegtay inay caddeyn u tahay sida ay uga go’an tahay in xudduudaha dalkaasi ay adkeyso.
Dowladda ayaa sheegaysa in xarumahaasi aanan loo baahnayn sababtoo ah siyaasadda iyo sharciyada dowladda ayaa hakiyay dadkii tirada badnaa ee dalkaasi magan-gelyada u soo raadsanayay, gaar ahaanna kuwa naftooda halista gelinayay si ay u gaaraan Australia.
Xarun si weyn ammaankeeda loo sugay oo lagu hayo dadka soogalootiga ah kuna taalla magaalada Melbourne, ayaa dhawaan albaabada loo laabi doonaa, halka xarun taa la mid ah oo ku taalla Sydney iyana la xiri doono bilaha soo socda.
Dowladda Australia ayaa sheegtay in xiritaanka xarumahan ay muujinayaan guulaha laga gaaray dadaallada ay ku ilaalinayso xudduudaha dalkeeda.
Tan iyo sanadkii 2013-kii, ciidanka badda ee Australia ayaa dib u celiyay doomo ay saarnaayeen muhaajiriin badan, siyaasaddaasi oo dadka dhaliilsan ay ku tilmaameen mid baalmarsan sharciga caalamiga ah.